Ny Bokin i Isaia, na Bokin i Izaia, dia boky faminaniana voalohany sy lava indrindra ao amin’ ny Tanakh sy ao amin’ ny Testamenta Taloha ao amin’ ny Baiboly. Ny Bokin’ i Isaia no bokim-paminaniana mahakasika lohahevitra maro izay voavelabelatra amin’ ny fomba lava dia lava, ka ireto ny tena lehibe amin’ izany: ny maha-tokana an’ Andriamanitra mônôteisma, ny faharavan’ i Babilôna sy i Tiro, ny fanantenana ny Mesia mpanjaka ary ny Andro farany. Manasongadina ny halehibe amam-boninahitr’ Andriamanitra izay manerana izao rehetra izao sy ny maha tompon’ ny Tantara sy ny Zavaboary an’ Andriamani ...
Ny Sadoseo na Sadoseanina dia ireo mpikambana amin ny antoko iray amin ny efatra lehibe amin ny firehan ny fivavahana jiosy tamin ny Andro Taloha tao Jodea tamin ny taonjato faha-2 tal. J.K. sy taonjato voalohany taor. J.K. Ny antoko telo hafa dia ny Fariseo na Farisiana, ny Eseniana ary ny Zelôta. Atsoina hoe Sadoseo koa ireo mpitondra fivavahana tamin ny andron ny Tempoly Voalohan i Jerosalema. Avy amin ny saranga ambonin ny mpisorona ny Sadoseo, izay nifanohitra tanteraka amin ny Fariseo sady tokony nifanohitra koa tamin ny Eseniana. Nofongorin ny Zelôta sy ny Sikara izy ireo tamin ny A ...
Ny Vavolombeloni Jehovah dia fikambanana kristiana mino ny fitondran’ny Mesia mandritra ny arivo taona sy mihevi-tena ho mamerina amin’ny endriny tany amboalohany ny fivavahana kristiana. Io fikambanana io dia nipoitra avy aminny fikambanana atao hoe "Bible Students" (azo adika hoe "Mpianatra Baiboly" notarihini Charles Taze Russell izay nandray ampahany betsaka taminny fampianarani William Miller, indrindra taminny adventisma, taminny alalanireo mpitoriteny adventista toa ani Jonas Wendell. Isanireo atao hoe "fiangonana zandriny" ny Vavolombeloni Jehovah sady misy koa ny manao azy hoe "se ...
Ny Filazantsara araka ani Marka, na Vaovao Mahafaly araka ani Marka, na Evanjely araka ani Masindahy Marka dia faharoa aminny Filazantsara ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly. Ny asa nataoni Jesosy no tianny mpanoratra hampitaina: asehony i Jesosy eo am-panatanterahana ny asany aminny fanasitranana ny marary, aminny fampitomboana isa ny mofo ho anny vahoaka. Izany asa izany dia tantarainny mpanoratra mba hanaporofoany ny maha avy aminAndriamanitra ani Jesosy. Tsy latsaky ny 18 ny isanireo fahagagana tantarainy. Ao aminny andininy voalohany fotsiny dia efa milaza sahady ny mpanora ...
Ny Fiangonan i Jesoa Kris ty ho anny Olomasinny Andro Farany izay antsoina hoe koa Fiangonana môrmôna, dia fiangonana kristiana restaorasionista teraka tao amin ny Fanjakan i New York any Etazonia tamin ny taona 1830. I Joseph Smith no mpanorina azy. Ny mpino ao aminy dia mihevitra azy ho fiangonana vokatry ny fanambaràna avy amin Andriamanitra. Izy ireo no atao hoe Olomasin ny Andro Farany. Ao Salt Lake City any Utah no misy ny foiben-toerany. Manana mpikambana miisa 16 000 any ho any io fiangonana io maneran-tany. Laharana fahefatra izy ao Etazonia amin ny habetsahan ny mpino izay miisa ...
Ny Andriamasinavalona tany am-piandohany dia ireo taranaka rehetra avy amin’ ny zanak’ Andriamasinavalona, mpanjaka, izay nanoa, sy ny zanak’ anabaviny sy ny zana-drahalahiny nahazo menakely, nipetraka am-bodivona teto Imerina. Ny Andriamasinavalona ireo taranaky ny mpanjaka Andrianjaka indrindra izay tsy voasokajy ho Zanakandriana na Zazamarolahy, isan izany ny Zanadranavalona ao Anosimanjaka. Maro koa ny Zanakandriana sy Zazamarolahy no natao ho Andriamasinavalona. Ary misy koa ny "Zanadralambo amin Andrianjaka" toy ny avy amin ny terak Antsomangy no natao ho Andriamasinavalona. Maro koa ...
Tsimihety Androna. Mino ny tromba, tahaka ny foko malagasy tantsiraka maro, ny Antankarana. Ny tromba dia fomba ahafahan ny fanahin ny razana mifandray amin
ara - pitsipiteny an izany. Ny anarana hoe fianakaviana izay tokony ho anaram - bodrona, dia tsy avahan ny fiteny malagasy ho anaram - bodrona na anaran - tsinga
nanova ny tantaran izao tontolo izao tamin ny Andro Taloha. Isan ny fianakaviana akemenida i Kirosy Lehibe izay nandimby an - drainy i Kambisesy I nitondra
fiainany manokana, dia olona miavo - tena izy. Fanaovan - dronono kely an ny fianakaviana no notantaniny ka nanjary lasa orinasa ngeza, tamin ny alàlan ny fanampian ny
anarivo amin ny tanàna sirianin i Antilibàna miaraka amin i Maaloula sy fianakaviana am - pielezana any amin ny tanàna siriana sy libaney ary any Amerika ny
hatramin ny 100 isaky ny fianakaviana ny vola vahiny. Tamin ny Mey 2003, ny Arary malagasy no misolo ny Franc Malagasy iraimbilanja Nanomboka tamin
mpiteny daia fiteny maaniany indrindra indrindra fiteny iray fianakaviana amin ny fiteny malagasy rehetra. Ny fe - potoana nahatongavan ny Aostrônezianina indrindra
taonjato faha - 15 no nanomboka izany fanao izany, nefa ny fandinihana ny fomba amam - panaon ny mponina any Azia Atsimo - Atsinanana dia ahatsapana fa fitohizan ny
Ny tolom - bahoaka tamin ny 1947 dia fikomiana nataon ny Malagasy tamin ny taona 1947 sy 1948 teto Madagasikara, tamin ny fotoana naha zanatany frantsay
ny Toliara Sands mba hanatanterahany ny fitrandrahana ataony. Hampiasa fomba fanetonana sy fandranohana izy mba hahazoany mampiasa indray ny rano efa
matihanina Pro Ny website dia natao ho an ny mpanoratra mpanakanto sy ny fianakaviana namana, ary mamela ny famoahana ary fizaràna iray ihany ny toerana ny
Andrianampoinimerina dia mpanjaka malagasy tao Imerina izay nanjaka tamin ny taona 1787 hatramin ny taona 1810. Andriamiharamanjaka no rainy ary
ity fety kristiana ity, izay mitodika kokoa any amin ny ankizy sy ny fianakaviana ary ny fanomezana. Iray amin ireo fetim - pahaterahana ankalazain ny